YAAB: Dareenka Qolka Labiska Real Madrid, Siday Xiddiguhu U Arkaan Hazard, Rajo La'aantooda Champions League & Sir Hoose Oo La Helay - Gool24.Net
YAAB: Dareenka Qolka Labiska Real Madrid, Siday Xiddiguhu U Arkaan Hazard, Rajo La’aantooda Champions League & Sir Hoose Oo La Helay
Saxafiga kubadda cagta Spain ee Edu Aguirre ayaa banaanka keenay sheeko xiiso leh oo la xidhiidha qolka labiska Real Madrid kaddib markii uu xog ka helay ciyaaryahan kooxdaas ah oo uusan magaciisa xusin.
Sida uu sheegayo saxafi Edu Aguirre, waxa jira wer-wer ka taagan qolka labiska Real Madrid dhexdiisa kaas oo ah in ay kooxda awoodi weydo inay u tartanto tartanka ugu xiisaha badan Yurub ee UEFA Champions League xilli ciyaareedkan.
Real Madrid oo labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay wareega 16-ka kaga hadhay Champions League ayaan wax saxeex ah samayn gudaha suuqan oo xidhmay xalay oo Isniin ahayd.
Ciyaaryahanada kaliya ee lagu soo daray safka Zidane ayaa kala ah Martin Odegaard, Andriy Lunin iyo Odriozola oo amaah kaga maqnaa xilli ciyaareedkii hore.
Sida uu Aguirre u sheegay muuq-baahiyaha ree Spain ee El Chiringuito ayuu ku sheegay in ciyaaryahan Los Blancos ahi uu uga warramay rajadooda ah in Eden Hazard uu ugu dambayn qaabkiisii wacnaa kusoo noqon doono iyo inay ka wer-wer qabaan inay u tartami doonaan CL.
Edu Aguire ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Ciyaaryahan ayaa aniga igu yidhi in marka la eego waxa ay haystaan aysan haysan wax ku filan si ay Champions League ugu guuleystaan”
“Iyo in qolka labiska Real Madrid ay si aad ah u rajaynayaan in Hazard uu qaabkiisii ugu wanaagsanaa noqon karo”
Hazard ayaa ilaa hadda 22 kulan usoo ciyaaray Real Madrid isagoo kaliya hal gool soo dhaliyay xilli uu dhibane usoo noqday dhaawacyo dib u dhac weyn galiyay.